Qaar kamid ah qaxootigii ka yimi Yaman oo ganacsi iyo dhul beereed ka samaystay Jowhar
Radio Ergo 02 October, 2017 JAWHAR
Saddex kamid ah qaxootigii Soomaaliyeed ee ka tegay Yaman oo ay muddo 17 sano ah ku noolaayeen ayaa magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka bilaabay ganacsi aan horay uga jirin deegaanka. Waxay magaalada ka fureen meherad lagu iibiyo cuntada kasoo baxda gudaha dalka, taasi oo u noqotay fursad shaqo oo ay ku maareeyaan noloshooda.
Xassan Maxamed waa 39 jir, wuxuu kamid yahay raggan. Sanadkii 2000 ayuu u qaxay Yaman isaga oo ka tegay Jowhar oo xilligaas ay colaado ka jireen. Wuxuu deganaa xaafadda Basaatiin ee magaalada Cadan oo ay Soomaalidu ku badantahay.
“Markaan Yaman joogay nolosheydu waa adkayd, maqaaxi ayaan ka shaqayn jiray alaabta ayaan dhiqi jiray, boqol riyaal ayaana la isiin jiray, sidaas ayaan wax la cuno ku heli jiray”
Xassan oo ay weheliyaan Shiikh Cumar Xassan iyo Xusseen Faarax ayaa iibsaday hal hiktar oo dhul beereed ah oo ay hadda uga soo go’ay galeeydii ugu horraysay.
Xassan ayaa sheegay in dhulka ay beerteen laga siiyey 2500 oo dollar, “1100 doollar ayaan sii bixinay, inta kale deyn ayaa naloogu leeyahay, hadda 26 kiish oo galey ah ayaa nooga soo go’day, waxaanna rajaynaynaa inaan iska bixino daynta nagu hartay” Ayuu yiri Xassan.
Waxay ka mid yihiin 30 qoys oo ka mid ah dadkii Yaman ka soo noqday bishii November 2016, markaas oo lagu keenay doon, waxay degeen xerada lagu barakacay ee Sarkuusta ee duleedka Muqdisho, UNHCR ayaana muddo saddex bilood ah qoyskiiba siinaysay 100 doollar, lacagtaas ayaana markii danbe la joojiyay. Bishii Janaayo ayeyna iyagoo 7 qoys ah u soo wareegeen Jowhar oo ay ka degeen xero ay ku jiraan dad soo barakacay oo la yiraahdo Sheekh Cumar.
Sheekh Xuseen Caden oo 42 jir ah, waa xaasle 5 caruur ah haysta, wuxuu ka mid yahay raggaan ganacsiga samaystay, wuxuu sheegay, in bilowgii hore ay beero qodis ku bilaabeen shaqada.
“Saddexdeenuba waa faramarneyn markaan nimid Jowhar, waxaanan si koox ah isugu raacaynay inaan soo falno beeraha, xoogeenana ku lacag qaadanno, maalintii wax 2 dollar ilaa saddex dollar la mid ah ayaan soo helaynay, halkaas ayaan nolosha ka bilownay” Ayuu yiri Sheekh Xusseen.
Raggan ayaa markii danbe isu keenay lacag dhan 3 Milyan oo Shilin oo u dhiganta 140 doollar. Waxayna 40 doollar ku kiraysteen qol halka inta kalena ay ku iibsadeen maacuun iyo kuraas ka samaysan alwaax, sidaasna ay ku bilaabeen shaqada bishii Maarso ee sanadkan.
Maamulaha maqaaxida Maqsuud Shiine Xaaji Cabdullaahi, kana mid ah saddexdaan qof, ayaa raadiyaha Ergo u sheegay waxyaabaha ay ku diyaariyaan goobtan.
“Waxaan ku iibinaa cuntada beeraha gudaha ka soo baxda, sida galeyda shiidan ,masagada , digir iyo nacfiga xoolaha, waxaa ka shaqeeya 9 qof, waxaan siinaa qofkasta mushaar ahaan 100 kun shilin soomaali waxaanay bishii markaan kharashaadka iska bixino soo saartaa lacag dhan 6 milyan oo shillin, oo aan kala qaybsano” Ayuu yiri Maqsuud.
Raggan ayaa sheegay inay u shaqeeyaan sidii shirkad oo kale, ayna isu kala qaybiyaan tacabka beerta iyo ka shaqaynta goobta cuntada, ayna hadda nolosha deegaanka la qabsadeen.
Sheikh Xuseen Cadaan ayaa Ergo u sheegay in isaga qoys ahaan uu hadda kiraystay guri, isagana guuray xeradii barkaca.
“Laba qol oo cariish ah ayaan deganahay, waxaa kiro la iiga qaadaa bishii 600 oo kun oo shillin Somaali ah una dhiganta ($26), waana iska bixiyaa, hadda inaan dhul iibsado ayaan rabnaa markaa daynta beerta iska dhamayno oo guryo qoysaska noo degaan aan tacabkooda galno” Ayuu yiri Xuseen.
Wuxuu intaas ku daray in sidoo kale saaxibadiisna yihiin kuwo guryo kiro ah degan, saddex ka mid ah shantiisa carruurta ah ay hadda u dhigtaan dugsiga hoose dhexe ee Horseed oo ah iskuul si bilaash ah wax looga barto, oo maamulka Jowhar uu gacanta ku hayo.